Isnye Bụ Gị B2B asịwo? | Martech Zone
Isnye Bụ Gị B2B asịwo?
Anyị na-ahụ ndị ahịa anyị na-agba mgba mgbe mgbe site na ụda nke ọdịnaya ha… ha na-echegbu onwe ha na ọdịnaya ha dị oke oke ma ọ bụ na ọ bụghị ọkaibe maka ndị na-ege ha ntị. Anyị kwenyere na ọtụtụ ọkaibe kachasị dị irè. Ndị na-agụ achọ ọdịnaya nwere ikike dị elu gafere ọdịnaya nke na-enweghị mmasị. Ha anaghị ekpe ụlọ ọrụ ikpe ma ọ bụ mbipụta ikpe, ha na-agafe ya. Ọdịnaya nke dịkarịsịrị mkpa ga-abụ isi ihe maka atụmanya ndị na-enweghị nghọta banyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Na ide ederede dị elu oge niile nwere ike itinye ngwaahịa gị na enweghị isi ka ha ghara iru mkpa ha.
Ndị na-azụ ahịa ụlọ ọrụ na-etinye mmasị B2C maka azụmaahịa B2B, nke pụtara na ndị na-eweta ngwaahịa ga-enyerịrị ahụmịhe ntanetị dị oke mkpa, dị mfe iji. Understand na-aghọta gị asịwo?
Tags: b2bb2b onye na-azụ ahịaonye b2b
Ndụmọdụ 10 maka Mmelite Ọkwa Ka Mma